Ecclesiastes 12 NIVUK – Ɔsɛnkafoɔ 12 ASCB | Biblica
Ecclesiastes 12 NIVUK – Ɔsɛnkafoɔ 12 ASCB
1Kae wo Bɔfoɔ
wɔ wo mmeranteberɛ mu,
na mfeɛ a wobɛka sɛ,
“Menni mu anigyeɛ biara” no reba,
ɔsrane ne nsoromma aduru sum,
na omununkum asane aba osutɔ akyi.
3Ɛberɛ a efie no awɛmfoɔ ho popo,
na mmarima ahoɔdenfoɔ akom,
ɛberɛ a ayamfoɔ agyae adwumayɛ, sɛ wɔsua enti
na wɔn a wɔhwɛ mpoma mu no ani so ayɛ kusuu;
4ɛberɛ a wɔatoto abɔntene no apono mu
na ayammeeɛ nnyegyeeɛ ano abrɛ ase;
ɛberɛ a nnipa te nnomaa su na wɔanyane,
nanso wɔn nnwontoɔ ano brɛ ase;
5ɛberɛ a nnipa suro ɛsoro kɔ
ne mmɔntene so amanenyasɛm;
ɛberɛ a sorɔno dua bɛgu nhyerɛnne
na abɛbɛ wea korɔ
na nkatedeɛ ho adwodwoɔ.
Afei onipa kɔ ne daa homeɛ mu
na agyaadwotwafoɔ tu gu mmɔntene so.
6Kae no, ansa na dwetɛ ahoma no ate,
anaasɛ sikakɔkɔɔ ayowaa no abɔ;
ansa na sukuruwa no abobɔ wɔ asutene ho,
anaasɛ asubura so nkyimiiɛ abubu,
7na dɔteɛ sane kɔ asase a ɛfiri mu baeɛ,
na honhom no tu kɔ Onyankopɔn a ɔde maeɛ no nkyɛn.
8“Ahuhudeɛ mu ahuhudeɛ” ɔsɛnkafoɔ no na ɔseɛ.
“Biribiara yɛ ahuhudeɛ!”
Asɛm No Awieeɛ
9Ɔsɛnkafoɔ no yɛ onyansafoɔ na ɔde nimdeɛ maa nnipa nso. Ɔdweneeɛ na ɔyɛɛ nhwehwɛmu na ɔbubuu mmɛ bebree. 10Ɔsɛnkafoɔ no hwehwɛɛ sɛ ɔbɛnya nsɛm a ɛfata, na deɛ ɔtwerɛeɛ no yɛ pɛ na ɛyɛ nokorɛ nso.
11Anyansafoɔ nsɛm te sɛ anantwikafoɔ mpea. Wɔn nsɛm a wɔaboa ano te sɛ nnadewa a wɔde abobɔ dua mu ma akɔ mu yie. Saa nsɛm yi nyinaa firi Odwanhwɛfoɔ baako nkyɛn. 12Mebɔ wo kɔkɔ sɛ twe wo ho firi biribiara a ɛka yeinom ho, me babarima.
Nwoma bebrebe atwerɛ nni awieeɛ, na ne sua pii no ma honam yɛ mmerɛ.
nsɛm no awieeɛ nie:
Suro Onyankopɔn na di nʼahyɛdeɛ so,
na onipa asɛdeɛ nyinaa nie.
14Onyankopɔn bɛbu adeyɛ biara atɛn,
deɛ wɔayɛ asie nso ka ho,
ASCB : Ɔsɛnkafoɔ 12